हेर्नुहोस्, आज आईतबारदेखी (१८-२४) शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हेर्नुहोस्, आज आईतबारदेखी (१८-२४) शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल
मेष : मेष राशिका लागि साताको सुरुवातमै महत्वपूर्ण फाईदा हुने देखिन्छ। साताको मध्यमा धन लाभ हुने सम्भावना छ भने प्रेममा सफलता मिल्ने देखिन्छ। साताको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा गडबड हुने देखिन्छ। ध्यान दिनुहोला।
बृष : वृष राशि हुनेहरुका लागि यो साता निकै राम्रो रहेको छ। देश विदेशको यात्रा सफल देखिन्छ। साथिभाईसँगको सम्बन्धमा गाढापन आउनेछ भने मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छ। बोलीको प्रशंसा हुनेछ भने शुक्रबार केही अप्रिय घटना सुन्नु पर्ला।
मिथुन : अहिलेसम्म विवादित बनेका कामहरु पुरा हुनेछन्। आपसी सम्बन्धमा भने वादविवादको योग रहेको छ। पठनपाठनमा प्रगती देखिन्छ भने बुधबार र बिहीबार शुभ समाचार सुन्न पाईएला। बोलीको कदर हुनेछ।
कर्कट : कर्कट राशिका लागि यो साता मध्यम खालको रहेको साताको सुरुवातका दिनमा आकस्मिक धन लाभ हुने देखिन्छ। आँखामा समस्या हुने देखिन्छ भने साताको अन्त्यमा यात्रा हुने देखिन्छ।
सिंह : साताको सुरुवातमा रोजगारमा पदोन्नती हुने देखिन्छ। प्रेममा प्रगति हुने देखिन्छ भने धन लाभ, स्वास्थ्यमा प्रगती हुने देखिन्छ। मिष्ठान्न भोजन खाने अवसर मिल्ने छ भने साताको अन्तमा परिवारजनमा मन मुटाव हुने देखिन्छ।
कन्या : प्रियजनको सहयोगमा वैदेशिक यात्राको सम्भावना छ । तपाईंको पराक्रमको प्रशंसा हुनुका साथै कामको समेत मूल्यांकन हुनेछ । प्रेमी–प्रेमिकाबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ । साताको अन्त्यमा बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुने सम्भावना छ। सुनौलो रंग प्रेरणादायी सावित हुनेछ ।
तुला : प्रियजनको सहयोगमा वैदेशिक यात्राको सम्भावना छ । तपाईंको पराक्रमको प्रशंसा हुनुका साथै कामको समेत मूल्यांकन हुनेछ। प्रेमी–प्रेमिकाबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ । साताको अन्त्यमा बहुमूल्य उपहार प्राप्त हुने सम्भावना छ। सुनौलो रंग प्रेरणादायी सावित हुनेछ ।
बृश्चिक : तपाईंको निर्णय क्षमताले विभिन्न अवसरको ढोका खोल्नेछ । प्रतिस्पर्धामा सफलता हात पर्नेछ । आवेशमा गरिएका कार्य परिणाममुखी नहुन सक्छन् । पहेंलो रंगको प्रयोग शुभ छ । पश्चिमतर्फको यात्रा लाभदायक देखिन्छ।
धनु : गुणस्तरीय व्यवसाय सुरु गर्न साझेदारबीच मत मिल्नेछ । सहयोगीहरूले नै षड्यन्त्र गर्न सक्छन्, सचेतता अपनाउनुहोला । युवायुवतीमाझ नयाँ परिचय स्थापित गर्न सकिनेछ । मनोरञ्जन तथा भोजभतेरमा सहभागी हुँदा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेछ।
मकर : आफन्त तथा अभिभावकको सुझावले तपाईंलाई व्यवहारिक बन्न प्रेरणा दिनेछ । सभा–सम्मेलन तथा तालिममा सहभागी हुन पाइनेछ। आफ्नो प्रतिभाले उच्च कदर प्राप्त गर्नेछ । नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा फाइदै होला । कसैप्रति छिटो विश्वास गर्ने बानीले पछि परिनेछ।
कुम्भ : कार्य सम्पन्न गर्दा विवेक पुर्‍याए झमेलाहरू स्वतस् निर्मूल हुनेछन् । प्रतिष्ठा एवं पदोन्नतिको अवसरलाई चुनौतीका रूपमा आत्मासात् गरे नयाँ उचाइमा पुगिनेछ । मन पराउनेहरूसँग कम बोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ । खरानी रंगको पहिरनले आशीर्वाद बर्साउनेछ।
मीन : आकर्षक पहिरनबाट अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ । रोकिएका काममा पुनस् प्रयत्न गर्दा सफलता प्राप्त होला। पाहुनासँग रमाउँदै विशेष परिकारको आनन्द लिन पाइनेछ । लगानीले गतिलो आम्दानी हात लगाउनेछ । साताको अन्त्यमा सार्वजनिक कार्यमा सहभागी हुने अवसर जुट्नेछ।